Fandriam-pahalemana sy ny zana-bolana : rediredy sisa ny an-dRajoelina (+vidéo)
Aman’arivony dolara ny saran’ny fampiasana « satellite » ao anatin’ny segondra iray raha ny fanazavana nentin’ny CST Jeanson androany. Nambarany fa ny Frantsay sy ny Amerikana ihany no manana zana-bolana matanjaka ary mahatily akaiky. Raha ny an’ny etazonia dia 60 sentimetatra no fetran’ny fitiliana vitany ary tsy maintsy mividy sary velarana maromaro izay vao afaka mampiasa ity zanabolana amerikana ity. Ny an’ny Frantsay kosa dia somary efa nilaozan’ny toetrandro raha mihoatra amin’ny an’ny amerikana indrindra fa mainty sy fotsy ny sary avoakany.
« Sarotra ho an’i Madagasikara ny mampiasa ireo fitaovana ireo » hoy i Jeanson « satria na ny fandrindrana ny karaman’ny mpiasam-panjakana aza tsy vitan’izao fitondrana izao ». Araka ny nambaran’ity CST ity dia manana fahaizana manokana mikasika io resaka zana-bolana io ny tenany ka afaka milaza ny marina momba izany. Ny fireharehana amin’izany fampiasana « satellite » izany dia midika avy hatrany fa marefo ny fitondrana tarihin-dRajoelian manoloana ny tsy fandriam-pahalemana amin’izao fotoana ary tsy manan-katokona mihoatra ny kobaka am-bava mahazatra intsony izy ka zary miditra amin’ny sehatra tsy ananany fahalalana. Satria mpikarakara hetsika fampandihizana ny asany taloha dia miezaka mitana ny « effet d’annonce » amin’ny zavatra ataony i tgv saingy efa tsy mandaitra ihany koa izany ankehitriny satria mitombo isan’andro ny olom-pirenena tonga saina amin’ny tsy fetezan’ny zavatra ataony. Niantsy an-dRajoelina ho tonga ao amin’ny toeram-piasan’ny CST mihitsy moa i Jeanson satria « rehefa tsy mahay dia tokony mangina ary manontany mba hampianarina » hoy hatrany ity CST avy amin’ny Ankolafy RAVALOMANANA ity.
Faditseranana : miroso amin’ny fitokonana lavareny ny ao Toamasina
Mahatsiaro tena tsy mahita fitoniana amin’ny fanaovana ny asany ireo mpiasan’ny faditseranana ao Toamasina koa dia nanapa-kevitra ny handray fepetra hentitra. Tsy hiverina hiasa mihitsy izy ireo, araka ny fanambarana, raha tsy misy ny tomponandraikitra vonona ny hihaino ny fitakiany sy hanova ny fomba fiasa mba hialana amin’ny fanendrikendrehana ny « douaniers ». Rehefa misy mantsy ny fanondranana tsy ara-dalàna dia izy ireo hatrany no iharan’ny tsindry hazo lena fa ny tompon’ny entana dia mandry ivohon’ny vato satria « akaiky ny fitondrana ny ankamaroany.
Notsorin’ireto mpiasan’ny faditseranana ireto fa maro ny azo kianina raha ny kilavaka amin’ny fanaraha-maso ny entana ao amin’ny seranan-tsambon’i Toamasina. Ohatra amin’izany ny tsy fisian’ny « douaniers » manara-maso ny fampidirana entana haondrana ao amin’ity seranan-tsambo ity. Zandary sy mpiasan’ny MICTSL no fantatra fa ao amin’ny varavarana faha-5 izay mandefa ny entana eny amin’ny « terminal container » avy hatrany. Ity farany izay lasa tsy azon’ny mpiasan’ny faditseranana idirana intsony raha tsy mahazo alalana avy amin’ny MICTSL. Ity orinasa tsy miankina ity moa dia tokony tsy miandraikitra ankoatra ny fampanjariana ny fihodinanan’ny « terminal container » fotsiny ihany saingy efa ratsy laza hatramin’ny taona 2009. Raha tsiahivina dia ny volana jolay 2009 no fantatra fa nisy « container » telo tamin’ny anaran’ity orinasa ity tonga tao amin’ny seranan-tsambon’i Toamasina ary tsy azo nosavaina mihitsy izany. Araka ny fampitam-baovao taty aoriana dia baiko avy tao Ambohitsorohitra no nahafahan’ireo entana ireo nivoaka ary fitaovam-piadiana no tao anatiny. Manahy arak’izany ny mpiasan’ny faditseranana fa mbola mitohy hatramin’izao ny tsy fanarahan-dalàna ka ry zareo manao ny asany araka ny tokony ho izy indray no entina ampangaina lainga iarovana izay mangalatra eto amin’ny Firenena. Marihina fa ny 04 septambra teo no nifarana ny fe-potoana 48 ora nomen’ny mpiasan’ny faditseranana ao Toamasina ny ministeran’ny vola hampitsaharana ny mizana tsindrian’ila sy hanajana ny lalàna manan-kery momba ny faditseranana saingy tsy nisy nihaino izany ka izao miroso amin’ny fitokonana lavareny izao izy ireo.
FANAMBARANA_DOUANIERS_TOAMASINA.pdf 246.41 Ko
FANAMBARANA_2_DOUANIERS_TOAMASINA.pdf 283.84 Ko
TARATASY_FAMPITANDREMANA_FITOKONANA.pdf 679.27 Ko
18 Aogositra – 18 Oktobra : tombontsoan’iza ny tsy fandriampahalemana ? (+vidéo)
Mampanontany tena ihany ny tsy fahombiazan’ny hetsika izay ataon’ny mpitandro filaminana hamongorana izao asan-dahalo manerana ny Nosy izao. Ary vao maika nirongatra ny asan-dahalo tao anatin’ny fe-potoana 60 andro izay nolazain’ny SADC fa handrefesany ny fepetra rehetra mikasika ny filaminana mialoha ny hiverenan’ny Filoha RAVALOMANANA. Ary voamarika fa matetika dia lavo ny kaomandin’ny zandary any amin’ireny toerana isian’ny asan-dahalo ireny.
Mazava hoazy fa afaka ataon’ny FATE porofo izany hanamarinany fa tsy mbola milamina ny tany ka hangatahany andro indray momba ny fampiharana ny andininy faha-20 amin’ny tondro zotra. Rehefa vitany izany dia hataony izay tsy hahatraran’ny Filoha RAVALOMANANA ny enim-bolana mialoha ny fifidianana ka dia tsy ho afaka hirotsaka ny tenany. Io farany io no tena tanjon’ny mpanongam-panjakana satria fantany fa raha hifanandrina amin’ny Filoha RAVALOMANANA i tgv dia ho afa-baraka manoloana izao tontolo izao satria ho porofoin’ny fifidianana fa tsy ankasitrahan’ny Malagasy ny mpanongam-panjakana.
Ny fitsaram-bahoaka dia efa mampiseho fa tsy mahefa intsony ny fitondrana ka tsy atokisan’ny vahoaka. Mandray andraikitra izy ireo miaro tena mba tsy hanara-po ireo jiolahy. Raha amin’ny toe-tsaina repoblikana sy ny fitondran-tena politika mendrika dia efa nametra-pialana ireo ministra rehetra voakasik’izao resaka tsy fandriam-pahalemana izao. Mahagaga anefa fa dia mamikitra tsara eo amin’ny sezany izy ireo. Ny jeneraly minisitry ny foloalindahy aza dia mbola hamporisika ny fifamonoan’ny samy Malagasy indray. Nilaza mantsy Randrianazary fa « hampianarina auto-défense ny vahoaka any amin’ny faritra mafanafana ». Toa zarany aza hifandripaka ny sivily dia hitazam-potsiny ireo ireharehany fa « tandroka aron’ny vozona ».
Mitohy hatrany …
Ankoatra ny zava-nitranga tany amin’ny Faritra Anosy dia mbola mitohy hatrany ny fipariahan’ny asan-dahalo. Tany Beloha Tsiribihina dia nahatratra fito ny namoiy ny ainy androany tokony tamin’ny 01 ora maraina. Taorian’ny fanafihan-dahalo tamina tanàna iray, 05 kilometra monja miala ny renivohitry ny distrika, dia raikitra ny fanarahan-dia ka velona ny fifandonana teo amin’ny dahalo sy ireo zandary nanara-dia ny omby nangalariny. Telo no namoy ny ainy avy amin’ny zandary ary efatra kosa ny avy amin’ireo dahalo. Fantatra kosa amin’izao fotoana fa efa misy andian-dahalo nametraka fampandrenesana manerana ny kaomina Ambohidratrimo manambara fa hoavy izy ireo ary 80 lahy raha kely indrindra no isany.
Ingace Randriamamizafy :
FOLM : zo fototra ny fananana fonenana mendrika (+vidéos)
Fianakaviana 38 tafo no niharan’ny hain-trano teny Andavamamba Anatihazo herinandro vitsy izao. Maro ireo zaza no tratrin’izao olana izao nefa ny fidirana mianatra efa manakaiky. Noho ny fahatsapana ny voin-kava mahatratra indrindra no nitondran’ny vondron’ny mpanohitra fanampiana ho an’ireto mpiray tanindrazana ireto. Nomarihin’ny mpandrindra nandritra ny fihaonana fa « tsy ao anaty fitondrana » akory izy ireo fa « miady amin’ny tsy rariny kosa ». Vary fotsy, fitafy sy lamba mafana ary fiatovam-pianarana no tsirambin’ny tanana nentin’ny FOLM naneho fiaraha-mizaka tamin’ireto mponina izay efa sahirana ireto.
« Jereo izahay »
Antso avo amin’ny fitsinjovana ny fiainan’ny « ambany tanàna » no nentin’ny solontenan’ireo nahazo fanampiana. Mitaraina amin’ny fahasahiranana isan-karazany mahazo azy izy ireo ary mahatsiaro kamboty satria mahalana no mba misy mamangy toa izao. Nankasitrahiny anefa ny fahafoizan-tenan’ny vondron’ny mpanohitra tamin’ny fankaherezana sy ny fanampiana.
Mila fitoniana sosialy ny Malagasy
« Rehefa hampiharina ny tondro zotra dia atao manontolo » hoy Lalatiana Ravololomanana. Hita mantsy fa diso mitarazoka loatra ny krizy noho ny tsy fahasahian-dRajoelina manaja io fifanarahana politika io. Namafisiny fa isan’ny tokony nampiharina avy hatrany ny andininy faha-30 izay manafoana ny fanapahan-kevitra rehetra noraisiny talohan’ny 17 septambra 2011. Manaraka izany dia ny fanohizana ny fifampidinihan’ny samy Malagasy araka ny voalaza ao amin’ny andininy voalohany no tokony nimasoana. Raha mitohy manko izao tsy fandriam-pahalemana vokatry ny tsy fisian’ny fitoniana izao dia hitondra mankany amin’ny fifamonoan’ny samy Malagasy ary ho sarotra ny hanarina izany.